ကပ်ရောဂါဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း - Padaethar
လူတို့ အသက်တမ်း ၅၀၀- တမ်းအောက်၌ လောကတွင် အယုတ်တရားကြီး ၃-မျိုး ဖြစ်ပေါ်လာ၏။
၃။ မိစ္ဆာ ဓမ္မ ဆိုပြီး သုံးမျိုးရှိတယ်။
ယောက်ျား မိန်းမတို့သည် မိမိတို့ဆိုင်ရာ အာရုံများနှင့် မတင်းတိမ်နိုင်ကြဘဲ၊ အခြားတစ်ပါး၌ စွန်းငြိကျူးလွန်သော ရာဂတရားဖြစ်၏။ (လယ်တီဆရာတော်)
(တစ်နည်း) အမေ အဒေါ် အမ စသော ရာဂမဖြစ်သင့်သူတို့၌ တက်မက်သော ရာဂ တရားကို အဓမ္မရာဂ ဟု ခေါ်သည်။ (အဋ္ဌကထာ)
ယခုခေတ်မှာ အဖနဲ့သမီး၊ အမိနဲ့သား၊ အကိုနဲ့နှမ၊ဦးလေးနဲ့ တူမတွေပါ မကျန်ရအောင် ဖတ်လိုက်ရ၊ ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းတွေက ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါရဲ့လို့တောင် ထင်နေရတာ ဒါတွေဟာ တစ်ကယ်တော့ အဓမ္မရာဂ။ မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်ဖူး ဆိုပေမယ့် ဆုတ်ကပ် ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ကပ်ဆိုက်ဖို့အတွက် မကောင်းကြံတော့ ကပ်ဘေးကြီးဆိုက်ဖို့ အတွက် အကြောင်းတရားတွေ ဖန်တီးသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။
ပစ္စည်းဥစ္စာတို့၌ သူ့ဖို့ကိုယ့်ဖို့ မျှတခြင်း မရှိကြဘဲ ကိုယ့်ဖို့ကိုယ်သာ လုယက်ဆွဲငင်ကြသော လောဘတရား ဖြစ်၏။ရသမျှ ပစ္စည်းတွေက ဘယ်တော့မှပြည့်တယ်..တော်ပီ တန်ပါပြီဆို ရှိမလာခဲ့ကြဘူး ဖြည့်သာဖြည့်နေကြတာပြည့်သွားပြီဆိုတာ မရှိကြဘူး။ ရလေ လိုလေ အို တစ္ဆေဘဝ ဖြစ်နေကြတာတွေက များလှပလေ။
တိရစ္ဆာန်ကို သတ်မှုသည် အပြစ်မရှိ၊အရက်သောက်ခြင်းသည် အပြစ်မရှိအစရှိသဖြင့် ယူဆမှုမျိုး ဖြစ်၏။
အမှားကို အမှန်ထင်၊ အမှန်ပြင်သူကိုတော့ အများကမုန်း၊ကိုယ့်ကိုယ် လုံးလုံးမထိရင် အမှားတွေကို အမှန်လိုသုံးတဲ့ခေတ်။
ယောက်ျားအချင်းချင်း တပ်မက်ခြင်း၊ မိန်းမအချင်းချင်း တပ်မက်ခြင်းသည် မိစ္ဆာဓမ္မ မည်၏။ (အဋ္ဌကထာ)
ထိုအခါ နတ်ဗြဟ္မာတို့သည် လူတို့ကို မကြည်ညိုတော့ပြီ။ လူ့လောကကို မစောင့်ရှောက်ကြတော့ပြီ။ နတ်ဆိုးတို့ကို ထိန်းချုပ်ထားခြင်း မရှိတော့ဘဲ လွှတ်ထားကြကုန်၏။
နတ်ဆိုး သရဲ သဘက်တို့သည် လူတို့နေရာသို့ လာရောက်၍ လူတို့အား ကပ်ရောဂါအမျိုးမျိုးပေး၍ အသွေးအဆီတို့ကို စားသောက်ကြကုန်၏။
လူတို့ကို မရခဲ့သော် ကျွဲ နွား မြင်း သိုး စသော သတ္တဝါတို့အား ကပ်ရောဂါအမျိုးမျိုးပေး၍ အသွေး အဆီတို့ကို စားသောက်ကြကုန်၏။
ထိုကပ်ဆိုက်ရာ မြို့ရွာတို့၌ လူ ကျွဲ နွားတို့သည် ထောင် သောင်းများစွာ သေဆုံးကြကုန်တော့၏။
ခုလိုမျိုးကပ်ကြီးဆိုက်နေချိန်တောင်မှ တစ်ချို့တွေက ရတာလေးတွေကိုလောဘကြီးပြီးမဖြစ်သင့်တာတွေဖြစ်နေကြတယ်
တစ်ချို့က လိုချင်မှုလောဘတွေ မထိန်းနိူင်ကြတော့ဒေါသဖြစ်ကာ သူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်မိကြတယ်။
တစ်ချို့တွေက အတတ်ပညာရှိကြပြီးအသိပညာ အလိမ္မာဉာဏ်ပညာတရားတွေကင်းမဲ့သွားကာမလုပ်သင့် မဖြစ်သင့်တာတွေ မောဟဆိုတဲ့ မသိမှုကြောင့်ထပ်ခါတစ်လဲလဲ မှားနေကြတယ်။
တစ်ကယ်တော့ဒါတွေဟာ လောဘ ဒေါသ မောဟ တရားဆိုးသုံးပါးကြောင့်ရောဂန္တရကပ် ၊ သတ္တန္တရကပ် ၊ ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ် တွေ ဆိုက်လာကြတာပါ။
လူ့လောက၌လူ့အသက်တမ်း ၅၀၀ အထက်တွင် အယုတ်တရားကြီး၃ ခု မရှိသေးလျှင် နတ် သိကြား ဗြဟ္မာတို့သည်လူတို့ကို ကြည်ညို လေးစားကြကုန်၏။
လူ့လောကကို ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ကြကုန်၏။လူတို့ကို ထိပါးခြင်း မရှိရအောင်နတ်ဆိုးတို့ကိုထိန်းချုပ်ထားကြကုန်၏။
ထိုအခါ လူ့လောကတွင် မည့်သည့် ကပ်ရောဂါမျှ မရှိ။
ထို့ကြောင့် လူ့ပြည် လူ့လောကတွင်ကပ်ရောဂါများ မပေါ်ပေါက်လိုလျှင်အယုတ်တရားကြီး ၃ခုကို ဂရုပြုကြကုန်ရာ၏။
၁။ အင်္ဂုတ္တိုရ် တိကနိပါတ်၊ ပလောကသုတ်
၂။ ပါထိကဝဂ္ဂအဋ္ဌကထာ ၃၆၊ ရောဂန္တရဒီပနီ။
သရဏဂုံစွဲမြဲသူသရဏဂုံသုံးပါးကို မပြတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေသူတို့အားမည်သည့် နတ်ယုတ်မာတို့ကမှနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးခွင့်မရှိ နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီး၍ မရပါချေ။
ထို့ကြောင့် သရဏဂုံသုံးပါးကို ရွတ်ဖတ်ပွားများ ထုံမွှန်းထားပြီးဘေးဒုက္ခကပ်အပေါင်းမှ ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေသတည်း။
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး နှင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအားလုံးကပ်ရောဂါဆိုးကြီးမှ ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ…။
အရှင်ဝိသုတ- (ရေစကြို) Crd, original Uploader.
လူတို့ အသကျတမျး ၅၀၀- တမျးအောကျ၌ လောကတှငျ အယုတျတရားကွီး ၃-မြိုး ဖွဈပျေါလာ၏။
၃။ မိစ်ဆာ ဓမ်မ ဆိုပွီး သုံးမြိုးရှိတယျ။
ယောကျြား မိနျးမတို့သညျ မိမိတို့ဆိုငျရာ အာရုံမြားနှငျ့ မတငျးတိမျနိုငျကွဘဲ၊ အခွားတဈပါး၌ စှနျးငွိကြူးလှနျသော ရာဂတရားဖွဈ၏။ (လယျတီဆရာတျော)
(တဈနညျး) အမေ အဒျေါ အမ စသော ရာဂမဖွဈသငျ့သူတို့၌ တကျမကျသော ရာဂ တရားကို အဓမ်မရာဂ ဟု ချေါသညျ။ (အဋ်ဌကထာ)
ယခုခတျေမှာ အဖနဲ့သမီး၊ အမိနဲ့သား၊ အကိုနဲ့နှမ၊ဦးလေးနဲ့ တူမတှပေါ မကနျြရအောငျ ဖတျလိုကျရ၊ ကွားလိုကျရတဲ့ သတငျးတှကေ ဟုတျမှ ဟုတျပါရဲ့လို့တောငျ ထငျနရေတာ ဒါတှဟော တဈကယျတော့ အဓမ်မရာဂ။ မဖွဈသငျ့ မဖွဈထိုကျဖူး ဆိုပမေယျ့ ဆုတျကပျ ရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာ ကပျဆိုကျဖို့အတှကျ မကောငျးကွံတော့ ကပျဘေးကွီးဆိုကျဖို့ အတှကျ အကွောငျးတရားတှေ ဖနျတီးသလိုဖွဈနတောပေါ့။
ပစ်စညျးဥစ်စာတို့၌ သူ့ဖို့ကိုယျ့ဖို့ မြှတခွငျး မရှိကွဘဲ ကိုယျ့ဖို့ကိုယျသာ လုယကျဆှဲငငျကွသော လောဘတရား ဖွဈ၏။ရသမြှ ပစ်စညျးတှကေ ဘယျတော့မှပွညျ့တယျ..တျောပီ တနျပါပွီဆို ရှိမလာခဲ့ကွဘူး ဖွညျ့သာဖွညျ့နကွေတာပွညျ့သှားပွီဆိုတာ မရှိကွဘူး။ ရလေ လိုလေ အို တစ်ဆဘေဝ ဖွဈနကွေတာတှကေ မြားလှပလေ။
တိရစ်ဆာနျကို သတျမှုသညျ အပွဈမရှိ၊အရကျသောကျခွငျးသညျ အပွဈမရှိအစရှိသဖွငျ့ ယူဆမှုမြိုး ဖွဈ၏။
အမှားကို အမှနျထငျ၊ အမှနျပွငျသူကိုတော့ အမြားကမုနျး၊ကိုယျ့ကိုယျ လုံးလုံးမထိရငျ အမှားတှကေို အမှနျလိုသုံးတဲ့ခတျေ။
(တဈနညျး) ယောကျြားအခငျြးခငျြး တပျမကျခွငျး၊ မိနျးမအခငျြးခငျြး တပျမကျခွငျးသညျ မိစ်ဆာဓမ်မ မညျ၏။ (အဋ်ဌကထာ)
ထိုအခါ နတျဗွဟ်မာတို့သညျ လူတို့ကို မကွညျညိုတော့ပွီ။ လူ့လောကကို မစောငျ့ရှောကျကွတော့ပွီ။ နတျဆိုးတို့ကို ထိနျးခြုပျထားခွငျး မရှိတော့ဘဲ လှတျထားကွကုနျ၏။
နတျဆိုး သရဲ သဘကျတို့သညျ လူတို့နရောသို့ လာရောကျ၍ လူတို့အား ကပျရောဂါအမြိုးမြိုးပေး၍ အသှေးအဆီတို့ကို စားသောကျကွကုနျ၏။
လူတို့ကို မရခဲ့သျော ကြှဲ နှား မွငျး သိုး စသော သတ်တဝါတို့အား ကပျရောဂါအမြိုးမြိုးပေး၍ အသှေး အဆီတို့ကို စားသောကျကွကုနျ၏။
ထိုကပျဆိုကျရာ မွို့ရှာတို့၌ လူ ကြှဲ နှားတို့သညျ ထောငျ သောငျးမြားစှာ သဆေုံးကွကုနျတော့၏။ဤသညျမှာ ကပျရောဂါဆိုကျရခွငျးအကွောငျးဖွဈ၏။
ခုလိုမြိုးကပျကွီးဆိုကျနခြေိနျတောငျမှ တဈခြို့တှကေ ရတာလေးတှကေိုလောဘကွီးပွီးမဖွဈသငျ့တာတှဖွေဈနကွေတယျ
တဈခြို့က လိုခငျြမှုလောဘတှေ မထိနျးနိူငျကွတော့ဒေါသဖွဈကာ သူတဈပါးအသကျကို သတျမိကွတယျ။
တဈခြို့တှကေ အတတျပညာရှိကွပွီးအသိပညာ အလိမ်မာဉာဏျပညာတရားတှကေငျးမဲ့သှားကာမလုပျသငျ့ မဖွဈသငျ့တာတှေ မောဟဆိုတဲ့ မသိမှုကွောငျ့ထပျခါတဈလဲလဲ မှားနကွေတယျ။
တဈကယျတော့ဒါတှဟော လောဘ ဒေါသ မောဟ တရားဆိုးသုံးပါးကွောငျ့ရောဂန်တရကပျ ၊ သတ်တန်တရကပျ ၊ ဒုဗ်ဘိက်ခန်တရကပျ တှေ ဆိုကျလာကွတာပါ။
လူ့လောက၌လူ့အသကျတမျး ၅၀၀ အထကျတှငျ အယုတျတရားကွီး၃ ခု မရှိသေးလြှငျ နတျ သိကွား ဗွဟ်မာတို့သညျလူတို့ကို ကွညျညို လေးစားကွကုနျ၏။
လူ့လောကကို ကွညျ့ရှု စောငျ့ရှောကျကွကုနျ၏။လူတို့ကို ထိပါးခွငျး မရှိရအောငျနတျဆိုးတို့ကိုထိနျးခြုပျထားကွကုနျ၏။
ထိုအခါ လူ့လောကတှငျ မညျ့သညျ့ ကပျရောဂါမြှ မရှိ။
ထို့ကွောငျ့ လူ့ပွညျ လူ့လောကတှငျကပျရောဂါမြား မပျေါပေါကျလိုလြှငျအယုတျတရားကွီး ၃ခုကို ဂရုပွုကွကုနျရာ၏။
၁။ အင်ျဂုတ်တိုရျ တိကနိပါတျ၊ ပလောကသုတျ
၂။ ပါထိကဝဂ်ဂအဋ်ဌကထာ ၃၆၊ ရောဂန်တရဒီပနီ။
သရဏဂုံစှဲမွဲသူသရဏဂုံသုံးပါးကို မပွတျရှတျဖတျပူဇျောနသေူတို့အားမညျသညျ့ နတျယုတျမာတို့ကမှနှောကျယှကျဖကျြဆီးခှငျ့မရှိ နှောကျယှကျဖကျြဆီး၍ မရပါခြေ။
ထို့ကွောငျ့ သရဏဂုံသုံးပါးကို ရှတျဖတျပှားမြား ထုံမှနျးထားပွီးဘေးဒုက်ခကပျအပေါငျးမှ ကြျောလှားနိုငျကွပါစသေတညျး။
ကမ်ဘာသူ ကမ်ဘာသားအားလုံး နှငျ့ မွနျမာပွညျသူ ပွညျသားအားလုံးကပျရောဂါဆိုးကွီးမှ ကြျောလှားနိုငျကွပါစေ…။
အရှငျဝိသုတ- (ရစေကွို) Crd, original Uploader.
ကျောင်းသားကျောင်းသူနှင့် ဆရာဆရာမ ၁၀ ဦးကျော် ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စာသင်ကျောင်းများ ပိတ်ရခြင်းဖြစ်
(၂၉-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် အတည်ပြုလူနာသစ် (၇၇) ဦး တွေ့ရှိ